Superintendent / Letter from the Superintendent and Board of Education on Racial Injustice (Somali)
Letter from the Superintendent and Board of Education on Racial Injustice (Somali)
Farriin muhiim ah oo ka socota kormeeraha guud iyo Gudiga Waxbarashada
Gacaliyeyaal Bulshada Dugsiyada Cherry Creek,
Hadafkeena Dugsiyada Cherry Creek waa inaan ku dhiirigelino ardayda oo dhan, inay fekeraan, wax bartaan, guuleystaan, daryeel yeeshaan. Qeyb kasta oo ka mid ah arimahan waa muhiim , waa inaan ardaydeena ku dhiirigalinaa inay daryeel yeeshaan, waa inaan arrinta cadaalad darrada ula dagaalanaa ugana hortagnaa sdii aafadii hargabka. Nolosha dadka madow yaa ku xiran. Nolosha dadka madow waa muhiim.
Ilaa iyo bilowgii masiibada COVID-19 waxaa jiray falal macno darro ah oo daan-daansi ah, naceyb iyo cadaalad darro xaga isirka ah iyo dilal loo geystey inta badan bulshada Aasiyaanka ah(Asian). Dhowaan, waxaan daawanay caradii saxa ahayd ee ay muujiyeen bulshooyinka ku nool dalka oo dhan si looga jawaabo celiyo dilkii loo gaystay George Floyd, iyo kuwii kale, waxaan dareemaynaa caro iyo jahwareer. Waxaana nagu dhashay dareen deg deg ah inaan ka hadalo kana ficil celino.
Anagoo ah hogaamiyayaasha degmo dugsiyeedka waxaan dhaleecayneeyna cunsuriyada iyo naceybka isla markaana si adag ugu dadaalaynaa sidii heer sare loo gaarsiin lahaa ardayda oo dhan, aad ayaan uga fikirnay waqtigan la joogo . Caqabada baabi'inta nidaamyada dulmiya dadka midabka aan cadaanka ahayn leh waxaa taa noo sii weheliya dagaalka lagula jiro ka jawaabida masiibada COVID-19, dhibaatooyinkaas oo si gaar ah u taabanaya ardayda midabka leh, ardayda heleysa waxbarashada gaarka ah, bartayaasha Ingiriiska, iyo ardayda ku nool saboolnimada.
Si aan gacan uga geysano waqtigan bulshadu guryaha ku xayiran tahay inta lagu jiro masiibada, waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno ilo waxtar u leh kala-hadalka carruurta arimaha cadaalad darrada cunsuriyadda iyo xasilooni darada wadankeenna ka jirta hada. Macluumaadkan soo socda waxaa soo aruuriyay Xafiiskeena Iskuxirnaanta ee heer sare. (Fadlan la xiriir Omar Nur xaga Iimaylka - onur2@cherrycreekschools.org si aad u hesho macluumaad ku qoran laqadaada):
Teaching about Race, Racism and Police Violence (wabarista ku saabsan isirka)
Talking to Children After Racial Incidents (ka hadalka midab-takoorka)
The National Child Traumatic Stress Network (xarunta daryeelka caruurta)
Waxaan u qoraynaa si aan u xaqiijiyno balanqaadkeena aan kala go'a lahayn ee ku aadan sinaanta midabka iyo isirka ee Iskoolada Cherry creek. Waxaan u qoraynaa inaan dhaleecayno cunsuriyada. Waxaan u qoraynaa inaan canbaareyno nacaybka. Waxaan u qoraynaa si aan ugu dhiiri geliyo barayaasha iyo shaqaalaha Iskoolada Cherry Creek inay sii wadaan wada hadalka geesinimada leh ee ku saabsan sidii loo daryeeli lahaa ardaydeena midabka leh ee aan cadaanka ahayn.
Dugsiyada Cherry Creek, waxaan aaminsanahay in kala duwanaanshaha bulshadu ay tahay hantida ugu weyn ee aan haysano. Si kastaba ha noqotee, waxaan fahamsanahay ka hadalka kala duwanaanshaha in aysan ku filnayn oo kaliya, ee waa inaan abuuraa xaalad wanaagsan oo ay bulshadu kuwada dhaqanto. Sidaa daraadeed waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan kana shaqeysaan sidii aan dugsiyadeena uga dhigi lahayn meela ay dhamaan ardayda ka kala midabka ah, kala qawmiyada ah iyo kala asalka ah oo dhan ay dareemayaan nabadgalyo, qiimeyn iyo in la jecelyahay. Wadajir ahaan, waxaan sameyn karnaa isbedel fiican.
Scott Siegfried, Maamulaha guud iyo Gudiga Waxbarashada ee CCSD